ခရစ်ယာန် ဓမ္မဆရာ နှစ်ဦး မက္ကဆီကိုမှာ ခြုံခိုတိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်ခံရ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ခရစ်ယာန် ဓမ္မဆရာ နှစ်ဦး မက္ကဆီကိုမှာ ခြုံခိုတိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်ခံရ
Priests carry Catholic priest Germain Muniz's coffin during his funeral in the community of Apango, Guerrero state, Mexico, on February 6, 2018. Two priests and an elementary school teacher were killed on Monday in Guerrero, in an ambush in which four other people were injured. / AFP PHOTO / JESUS GUERRERO (Photo credit should read JESUS GUERRERO/AFP/Getty Images)
ခရစ်ယာန် ဓမ္မဆရာ နှစ်ဦး မက္ကဆီကိုမှာ ခြုံခိုတိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်ခံရ
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာ ခရစ်ယာန် ဓမ္မဆရာ နှစ်ဦး ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့က ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရလို့ သေဆုံးသွားပါတယ်။
မက္ကဆီကိုစီးတီး တောင်ပိုင်း၊ ဂူရီရိုပြည်နယ်၊ တက်စကိုနဲ့ အီဂွာလာမြို့ကြားမှာ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက် ဖာသာ အီဗန် အာနိုဗီ ဂျေးမက်စ်နဲ့ ဖာသာ ဂျာမိန်း မူနစ်ဇ် ဂါစီယာတို့ သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ကားကို ရုတ်တရက် တားဆီးပြီး သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ ရဲက ပြောပါတယ်။ ဓမ္မဆရာတွေနဲ့ အတူပါလာတဲ့ ခရီးသည် ၄ ဦးလည်း ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
ခရစ်ယာန် အဖွဲ့အစည်းက ဒီကိစ္စကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။ မက္ကဆီကိုမှာ ၅ နှစ်အတွင်း အသတ်ခံရတဲ့ ခရစ်ယာန် ဓမ္မဆရာ စုစုပေါင်း ၂၁ ဦး ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရဈယာနျ ဓမ်မဆရာ နှဈဦး မက်ကဆီကိုမှာ ခွုံခိုတိုကျခိုကျ သတျဖွတျခံရ
မက်ကဆီကိုနိုငျငံမှာ ခရဈယာနျ ဓမ်မဆရာ နှဈဦး ဖဖေျောဝါရီလ ၅ ရကျနကေ့ ခွုံခိုတိုကျခိုကျခံရလို့ သဆေုံးသှားပါတယျ။
မက်ကဆီကိုစီးတီး တောငျပိုငျး၊ ဂူရီရိုပွညျနယျ၊ တကျစကိုနဲ့ အီဂှာလာမွို့ကွားမှာ ခွုံခိုတိုကျခိုကျခံရတဲ့အတှကျ ဖာသာ အီဗနျ အာနိုဗီ ဂြေးမကျဈနဲ့ ဖာသာ ဂြာမိနျး မူနဈဇျ ဂါစီယာတို့ သဆေုံးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့တဈဖှဲ့က ကားကို ရုတျတရကျ တားဆီးပွီး သနေတျနဲ့ ပဈခတျခဲ့တာလို့ ရဲက ပွောပါတယျ။ ဓမ်မဆရာတှနေဲ့ အတူပါလာတဲ့ ခရီးသညျ ၄ ဦးလညျး ဒဏျရာရခဲ့ပါတယျ။
ခရဈယာနျ အဖှဲ့အစညျးက ဒီကိစ်စကို စုံစမျးစဈဆေးပေးဖို့ တောငျးဆိုထားပါတယျ။ မက်ကဆီကိုမှာ ၅ နှဈအတှငျး အသတျခံရတဲ့ ခရဈယာနျ ဓမ်မဆရာ စုစုပေါငျး ၂၁ ဦး ရှိသှားပွီ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleတစ်ထည်ကို ယန်း ၈ သောင်းတန် ကျောင်းဝတ်စုံ ပြောင်းလဲမယ့် ဂျပန်ကျောင်း ဝေဖန်ခံရ
Next articleအင်းဒင်ကိစ္စ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့ ရိုက်တာ ဂျာနယ်လစ် နှစ်ဦး လွှတ်ပေးဖို့ အမေရိကန် ပြော